FADEEXAD: Xiddigii Abaalmarinta Ballon d'Or Ku Guuleystay Bilooyin Kahor Ee Luka Modric, Kabtan Sergio Ramos & Luis Suarez Oo Hoggaaminaya Shaxda Kooxdii Ugu Xumayd Champions League 2018-19. - Gool24.Net
FADEEXAD: Xiddigii Abaalmarinta Ballon d’Or Ku Guuleystay Bilooyin Kahor Ee Luka Modric, Kabtan Sergio Ramos & Luis Suarez Oo Hoggaaminaya Shaxda Kooxdii Ugu Xumayd Champions League 2018-19.
June 6, 2019 Apdihakem Omer Adem
Shabakada Squawka oo ah mid inta ugu badan soo bandhigta xogaha kala duwan ee tartamada ayaa markan soo xulatay shaxda 11-kii xiddig ee ugu soo xumaa tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2018-19.
Shaxdan ayay kusoo baxeen xiddigo badan oo magac weyn waxaana kamid ah kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos, Weeraryahanka Barcelona ee Luis Suarez iyo waliba daafaca dhexe ee Man City Aymeric Laporte walow uu shaxdii ugu fiicnayd Premier League ku jiray.
Ugu horreynba, Shaxdan ayuu goolka kasoo muuqday goolhayaha kooxda Schalke 04 ee Ralf Fahrmann kaas oo 14 gool laga soo dhaliyay tartankan isla markaana kaliya 16 badbaadinood sameeyay.
Daafaca midig ayuu kasoo muuqday Sergi Roberto oo khadka dhexe ku wanaagsan balse uu Valverde u adeegsaday daafac midig halka uu daafaca bidix noqday Ashley Young oo bandhigyo musiibo ah kusoo bandhigay Man United.
Sidii aan horeba usoo xusnay waxa labada daafac dhexe ku jira Ramos iyo Laporte, Kabtanka Madrid ayaa kaadhka jaalaha ah ee ganaaxa saarayay si badheedh ah usoo qaatay kulankii lugta hore ee Ajax halka Laporte uu ku dhex muuq beelay kulankii lugtii labaad ee Tottenham.
Waxa si layaab leh khadka dhexe u hoggaaminaya Ballon d’Or oo ah ninka xiddiga dunida loo aqoonsaday ee Luka Modric, Saaxiibkiisa Toni Kroos & Nemanja Matic oo Man United ka qayb ah.
Labada garab weerar ayay ku jiraan Ivan Perisic iyo Philippe Countinho, Perisic ayaa lixdii kulan ee kooxdiisa Inter Milan soo wada ciyaaray balse wax gool ama caawin ah aan soo samayn halka Coutinho kulamada qaar uu keydka ugu jiray Malcom kaddib ciyaar liidata oo uu soo bandhigay.
Weeraryahanka dhexe ayaa loo xushay Luis Suarez kaas oo kaliya hal gool kasoo dhaliyay tartankan isaga oo haddana ilaa wareega afar dhammaadka soo gaadhay.
Footbal is my drug says:
Suarez waa ninka ugu assist-ga badan champions league